डिजिटल नाटक वास्तवमै रंगमञ्च थियो त ? - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
माघ ८, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कोरोना कालमा नाट्यकर्मीले डिजिटल माध्यमबाट नाटक मञ्चन गरे । फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिमिङ गरे । रंगकर्मी अनुप बरालको प्रश्न छ,'के त्यो वास्तवमा रंगमञ्च थियो त ?' उनी डिजिटल प्लेटफर्ममा रेकर्डेड नाटक देखाउँदा रंगमञ्चको स्वरुप हराएको बताउँछन् ।
'त्यो नाटक त १० वर्षपछि हेर्दा पनि स्थिर देखिन्छ । नाटकको मज्जा स्थिर नरहनुमा रहेछ । एउटै नाटक हामीले अगल-अलग तरिकाले मञ्चन भएको देखेका छौं । अलग तरिकाले देखाउँदा एउटै नाटकले फरक-फरक प्रभाव पारेको देख्छु,' उनी भन्छन् ।
कोरोनाले करिब १० महिना बन्द भएका नाटकघरहरुमा माघ १ गतेदेखि चहलपहल सुरु भएको छ । आर्थिक हिसाबले रंगमञ्चलाई पहिल्यैदेखि कोरोना लागिसकेको उनी बताउँछन् ।
'कोरोनाले जनजीवनलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्‍यो । त्यसको मारबाट रंगमञ्च कसरी अछुतो रहन सक्थ्यो र?', बुधबार मण्डला थिएटरमा भएको संवादमा उनले भने,'मैले भन्न खोजेको आर्थिक रुपले रंगमञ्च सुविधासम्पन्न, समृद्धिको उचाइमा कहिल्यै पनि गएन । त्यो हिसाबले आर्थिक रुपमा रंगमञ्चमा कोरोना थियो भन्न खोजेको हो ।'
कोरोनाले रंगकर्मीहरुलाई फर्केर हेर्ने समय दिएको उनको भनाइ छ । रंगमञ्चलाई सामाजिक मुद्दा उठान गर्नका लागि धारिलो हतियार भनिन्छ । सिमान्तकृत मानिसको आवाज यसले उठाउने र उज्यालो खोज्ने बाटोको रुपमा लिइन्छ । बराल भन्छन्,'के त्यो बाटो हामीले खोजिरहेका थियौं त ? भन्ने सोच्ने मौका दियो ।'
अहिलेको रंगमञ्च 'शहर' केन्द्रित भएको उनको बुझाइ छ । सबै मानिसलाई नम्बर वान बनुँ भन्ने हुन्छ, सहरमा । त्यो दबाबभित्र रहेर रचनात्मक काम गर्नु एकदम गाह्रो हुने बरालको अनुभव छ । रंगमञ्चमा गतिलो खुराक पस्कने, ऊर्जाको सञ्चय गर्न पनि कोरोनाले साहस दिएको उनले बताए । 'जीवनसँगको साक्षात्कारले रंगकर्मीलाई दिक्षित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोरोनाले असर गरेको छ तर धेरै कुरा सिकाएको छ,' उनले भने ।
एक दशकअघि नेपालमा राष्ट्रिय नाचघर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र केही गैर सरकारी संस्था(आरोहण,गुरुकुल,सर्वनाम)ले फाट्टफुट्ट नाटक गर्थे । रंगमञ्चमा त्यति नियमितता थिएन । तर अहिले गैर सरकारी संस्थाले आफ्नै पहलमा रंगमञ्च निर्माण गरेका छन् । 'जस्तै मण्डला, शिल्पी, थिएटर मल । यो चाहिँ ठूलो प्याराडाइम सिफ्ट हो,' उनले भने,'सरकारको सहयोग बिना आफ्नै पहलमा निर्माण भएको रंगमञ्च हेर्‍यो भने नेपाल अंग्रपन्तिमा आउँछ जस्तो लाग्छ ।' पछिल्लो समय नेपाली रंगकर्मीले दक्षिण एसियामै फड्को मारेको उनको दाबी छ ।
भारतीय अभिनेत्री सिमा विश्वासले शिल्पीमा नाटक गर्न आउँदाको प्रसंग जोड्दै बराल सुनाउँछन्,'तपाईंहरुको यो काम देखेर मलाई इर्ष्या लाग्यो । अब आसाम फर्केर आफ्नै पहलमा नाटकघर खोल्छु ।' ब्यान्डिट क्वीनबाट फुलन्देवीकी नामले परिचित सिमाको यो अठोट नेपाली रंगकर्मीका लागि ठूलो रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने झै कोरोनाअघि नाटकघरहरु धमाधम खुले । खुलेका नाटकघरलाई स्थायित्व दिन रंगकर्मी चुकेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय नाटक लेखकहरु पनि जन्मिएका छन् । रंगमञ्चको यो सकारात्मक पाटो रहेको उनले बताए ।
रंगकर्मबाट कयौं कलाकार हुर्काएका अनुप नाटकलाई क्षणिक कलाको रुपमा व्याख्या गर्छन् । 'नाटक क्षणिक कला हो । समयमा बाँच्ने कला हो यो,' उनले भने,'एकछिन दायाँबायाँ हेर्नुभयो भने त्यो पल छुटेर जान्छ । त्यो छुट्नुको पीडा र रोमाञ्चकता नै त्यसैमा छ । त्यो सामार्थ्यकै कारणले जीवित बनाएको लाग्छ । साहित्यको अन्य विधाबाट अलग बनाउनुमा यसको आफ्नै किसिमको स्वभाव हो । त्यो स्वभावलाई चिरस्थायी बनाउन खोज्यौं भने त्यहाँ थिएटर हुँदैन ।'
नाटक गरेरै जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ । नयाँ पुस्ताले पनि अझै त्यो संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । फिल्मले झै नाटकले मुनाफा कमाउनमै ध्यान राख्यो भने रंगमञ्चको सिर्जनशिलता हराउने बरालको भनाइ छ । 'फिल्म एउटा उत्पादन हो । त्यहाँ बेइमानीको काम पनि हुन्छ । त्यो मुनाफा कमाउन गरिन्छ । हामी नाट्यकर्मीलाई बाँच्नका लागि आधार चाहिएको छ । सँगसँगै बेइमानी नगरुँ भन्ने चेतना पनि चाहिएको छ,' उनले भने ।
रंगकर्मीको सामूहिक हितका लागि नाट्यकर्मी एकजुट हुनुपर्छ । रंगकर्मीका लागि सरकारले कल्याणकारी कोष छुट्याउनुपर्ने बरालको माग छ । 'जुन चिज व्यवसायिक हुन सकेको छैन । त्यसको ध्यान राख्ने सरकारको जिम्मेवारी हो,' सुनाउँछन्,'हामी सबैले कल्याणकारी कोष सरकारसँग माग्नु पर्‍यो । त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । राज्यले सधैं उदासिन तरिकाले हेरिरहेका छन् । किनकि हामी बोलिरहेका छैनौं ।'
अहिले रंगमञ्चमा विविधता देखिदैन । सहर केन्द्रित भएर दर्शकले मनपराउने नाटक मात्र दिन रुचाइरहेकाले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय फिल्ममा दर्शकले कमेडी रुचाए । नाटकमा पनि कमेडी मिसाउने कार्य भयो । फिल्ममा जस्तै कतिले नाटकमा गीत राखे । त्यसले नाटकको भाषामाथि प्रश्न उठायो । 'फिल्मजस्तो नाटक बनाउनु भन्दा फिल्म बनाए भइहाल्यो नि ! जुन चिज फिल्ममा पाइँदैन, त्यो चिज पाउनका लागि रंगमञ्चमा दर्शक आउने हो । यहाँ आएर फिल्मकै अनुभव लिएर जानुहुन्छ भने कसरी फरक भयो त ? त्यसलाई रंगमञ्च नभने भयो ,' उनी भन्छन्,'नाटकको साँचो स्वाद चाख्न चाहनेलाई त्यसले जिस्काएको पनि छ ।'
पछिल्लो समय नाटकलाई पुल बनाउँदै कलाकारहरु फिल्मतिर प्रवेश गरिरहेका छन् । कतिले यो प्रवृत्तिमाथि आपत्ति जनाउँछन् । कलाकारले आफ्नो क्षमतालाई फरक माध्यममार्फत प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
रंगकर्मीहरुलाई विदेशी नाटक मात्रै गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । तर आफूले विदेशी भन्दा पनि नेपाली नाटक नै गरेको उनको दाबी छ । विदेशी नाटकको चर्चा धेरै भएकाले यस्तो आरोप लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । 'कोर्ट मार्सल गरें, राजेश हमाललाई ल्याएर नाटक गर्दा खतरा हुन्छ भनेर गरेको होइन । राजेशलाई त्यो चरित्र सुहाउँछ भनेर गरेको हो,' उनी भन्छन्,'मैले विदेशी नाटक गर्छु भने त्यसलाई नेपाली अनुकुल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्छु ।'
कस्तो नाटक बनाउने मन छ भन्ने प्रश्‍नमा उनको जवाफ छ, 'देह भाषा, जहाँ शब्दहरु नहोस्, एकदमै थोरै दर्शकलाई देखाउने नाटक । जीवन मरणको अनुभव गराउने नाटक बनाउने मन छ । दर्शकले पनि यस्तो नाटक हेरियो कि जिन्दगीमा नीर रंग झैं बसेको भनुन् । म त्यो नीर रंगको खोजीमा छु ।'
प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १४:५२